चिकित्सकको आन्दोलनले बिरामी मारमा- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
चिकित्सकको आन्दोलनले बिरामी मारमा
भाद्र १७, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — सुनसरीदेखि राजधानीमा थप उपचारका लागि आइपुगेकी ४५ वर्षीया सुधमा देवी आइतबार उपचार नगरी फर्कनु पर्‍यो । थापाथलीस्थित प्रसूति गृह पुगेकी उनले टोकन पाइनन् ।
पाठेघर सम्बन्धी गम्भीर समस्या भोगिरहेकी सुधमा बेस्सरी ढाड दुख्ने, पाठेघरबाट गन्हाउने पानी र रगत बग्ने समस्या भोग्दै आइरहेकी छन्। उनले भनिन्, ‘गाउँमा मात्रै उपचार गाह्रो होला भनेको यता पनि यस्तै रैछ, काठमाडौंमा बस्ने ठाउँ पनि छैन।’ उनी निराश देखिन्थिन्। पाँच घण्टासम्म प्रतिक्षा गर्दा कुनै चिकित्सक नआएपछि उपचार नगरी उनी अस्पतालबाट बाहिरिन्।
नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) मा चिकित्सकसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै देशभरको आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेपछि बिरामीहरु विचल्लीमा परेका छन्। चिकित्सकहरुको आन्दोलनका कारण राजधानीका अधिकांश सरकारी अस्पताल प्रभावित भएका छन्।
बिरामीहरु उपचारबिनै फर्किन बाध्य भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलामा एप्रोनसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आइतबार ओपिडीको एउटा पनि टिकट काटिएन। काउन्टर बन्द भएपछि सेवा पनि ठप्प भयो। फलोअप र ओपिडीका बिरामी उपचारबिनै फर्किए भने शल्यक्रिया समेत प्रभावित भयो। आकस्मिक बाहेक लामो समयदेखि शल्यक्रियाका लागि पर्खिएका बिरामीको शल्यक्रिया समेत रद्द भयो।
पालो पर्खेर बसेका पित्तथैली, मृगौलाका बिरामी र गर्भवतीको शल्यक्रिया भएन। आइतबार शल्यक्रिया गर्ने भनेर तयारी अवस्थामा राखिएका बिरामी अस्पताल बेडमा अलपत्र छन्।
बेड चार्ज मात्रै बढेको र अस्पताल बसाई लम्बिएकोमा उनीहरू थप चिन्तित अनि आक्रोसित छन्। टाढाबाट आएका भर्नारत बिरामी आत्तिएका छन्। अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल रेर्कडर कुमार केसीले भने, ‘ शल्यक्रियाका लागि औषधी दिएर ठिक्क पारिएका बिरामीको उपचार भएन, रोकिएको शल्यक्रिया कहिले हुने हो थाहा छैन।’
वीर अस्पतालमा पनि आइतबार बिहानैबाट प्रभावित भयो। ओपिडी टिकट काउन्टर खुल्दै खुलेन। डाक्टरहरु उपचार कक्षमा बसेनन्। बिरामीले उपचारका लागि घण्टौ प्रतिक्षा गरे। टिकट नपाइएकोबारे उनीहरू अनभिज्ञ थिए।
दिउँसोसम्म अस्पताल परिसरमा अलमल गरिरहे। अघिपछि बिरामीको भीड लाग्ने अस्पताल दिउँसोदेखि सुनसान देखियो। अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले भने, ‘आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्, बिरामी अप्ठेरोमा छन्, सरकारले सक्दो चाँडो समस्या समाधान गरिदियोस्।’
प्रसूति गृहमा पनि बिहानैदेखि बिरामीले टोकन पाएनन्। प्रशासन प्रमुख रानु थापाले भनिन्, ‘हाम्रो अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भएकाले काउन्टर बन्द गरेका हौँ, सकेसम्म अस्पतालमा आन्दोलनको प्रभाव पर्न दिदैनौँ, भोलिदेखि काउन्टर खुल्छ।’
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भने आन्दोलनको खासै असर देखिएन। बिरामीको चाप भने अघिपछिभन्दा कम देखियो। आएका जति सबैले सेवा पाएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रुप नारायण खतिवडाले बताए।
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १४:३७
काठमाडौँ — राजधानीका अस्पतालमा सर्पले टोकेका बिरामीको संख्या केही दिनयता ह्वात्तै बढेको छ । वर्षायामसँगै सर्पको बिगबिगी बढेपछि बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको हो । अस्पताल आउने बिरामी उपत्यका आसपासका ग्रामीण भेगका बढी छन् ।
सर्पले टोकेपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी । तस्बिर : फातिमा
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक १० देखि १५ सर्पदंशका बिरामी आउने गरेका छन् । तीमध्ये कम्तीमा ५ जना भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कोही घाउ लिएर त कोही बेहोसी अवस्थामा अस्पताल पुग्छन् ।
गम्भीरखाले बिरामी १५ दिनसम्म भर्ना गरेर उपचाररत छन् । सर्पले टोकेपछि उपचारभन्दा पनि सर्प खोजेर मार्नेतिर लाग्दा बिरामी ढिलो अस्पताल पुग्ने गरेको अस्पतालका डा. अनुप बास्तोलाले बताए । उनले भने, ‘ढिलो अस्पताल पुग्दा शरीर प्यारालाइसिस भएर ज्यानै जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ, गर्भवती भए बच्चा खेर जान सक्छ ।’
विशेष गरी उपत्यकाको भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, थानकोट, टोखालगायत ग्रामीण ठाउँबाट सर्पदंशका बिरामी आउने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ । त्यस्तै धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, रामेछाप सिन्धुपाल्चोकबाट आउने बिरामीको संख्या पनि उत्तिकै छ । बिरामी पनि महिला बढी देखिएका छन् ।
वर्षाको समयमा खेतबारीमा काम गर्ने, झाडीतिर जाने र पानी जमेको खाल्डाखुल्डीतिर सर्पले टोक्ने गरेको अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुुनले बताए । उनले भने, ‘सर्पले नै टोकेर भन्दा पनि टोकेपछिको त्रासपूर्ण मानसिकताले पीडित भएका बिरामी बढी आउँछन्, आँधो र हरेउजस्ता पहाडिया सर्प ज्यानै लिने खालका विषालु हुँदैनन् ।’ सबै सर्प विषालु हुँदैनन् । कुनै सर्पले टोकिहाले पनि विष लाग्दैन । आँधोले टोक्दा सुन्निने, बेस्सरी दुख्ने हुन सक्छ ।
सर्पले टोकेपछि उपचारभन्दा पनि झारफुक गर्ने अन्धविश्वासी अभ्यासका कारण केही बिरामी भने गम्भीर अवस्थामा आउने गरेका छन् । कसैले भने आफैं उपचार गर्ने अभ्यासका कारण पनि घाउ बिगारेर आउँछन् । घाउमा कपडाले बेस्सरी बाँध्ने, जथाभावी जडीबुटी लगाउने, मुखले विष चुस्ने गलत उपचारका केही उदाहरण हुन् ।
गलत उपचारकै कारण रगतमा संक्रमणदेखि रगत जमेर टोकेको अंग कालो भएर जान्छ । शल्यक्रिया नै गरी काटेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा समेत बिरामी आउने गरेको डा. पुन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सर्पले टोकिहालेमा साबुनपानीले सफासँग घाउ पखाल्नुपर्छ र सक्दो चाँडो अस्पताल आइपुगेमा अवस्था धेरै बिगँ्रदैन ।’ समयमै अस्पताल पुग्दा टोकाइका कारण रगतमा विष फैलिए नफैलिएको पत्ता लाग्छ । कहिलेकाहीँ घाउबाहिर रगत नबगे पनि आन्तरिक रक्तस्राव भइरहेको हुन्छ । उपचारमा यो पत्ता लागे जटिलता कम भई मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
कसैलाई राति सुतिरहेका बेला वा झाडीतिर जाँदा सर्पले टोक्ने हुँदा थाहा पाउँदैनन् । सर्पले टोक्दा वाककाकी लाग्ने, घाउ, नाकमुख र दिसापिसाबबाट रगत बग्ने, आँखा धमिलो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् । वर्षायाममा उपत्यकालगायत पहाडी क्षेत्रमा सर्पको बिगबिगी हुँदा सतर्क हुनुपर्ने डा. पुुन सुझाउँछन् ।
सरुवा रोग अस्पतालमा गएको वैशाखदेखि भदौ पहिलो सातासम्म १ सय ८६ सर्पदंशका बिरामीले उपचार गरेका छन् जसमा आधाभन्दा बढी बिरामी महिला नै छन् । औसतमा दैनिक १५ जना जस्तो अझै उपचारका लागि अस्पताल पुगिरहेका छन् । यसैबीचमा सर्पदंशकै कारण अस्पतालमा एक गर्भवतीको मृत्यु भयो । विशेष गरी असारदेखि असोज महिनामा सर्पदंशका बिरामी अस्पताल आउने गरेको मेडिकल रेकर्ड शाखाको तथ्यांक छ ।
अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था नहुँदा सर्पले टोकेर गम्भीर अवस्था भएका बिरामीलाई उपचार गर्न समस्या भइरहेको डा. यादवले सुनाए । ‘विषालु सर्पले टोकेका बिरामीको ज्यानै जाने खतरा हुन्छ, त्यस्ता बिरामीलाई यहाँबाट उपचार हुँदैन, ‘उनले भने, ‘आईसीयू भएको अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्छ ।’जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालको आईसीयू सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष सरुवा रोग अस्पतालबाट सर्पदंशका ८५ बिरामीलाई भर्नै गरेर उपचार गर्नुपरेको संयोजक पुनले बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष देशभर करिब ६ हजार व्यक्ति सर्पको टोकाइबाट घाइते भएका थिए जसमध्ये २३ को विषालु सर्पको टोकाइले मृत्यु नै भएको थियो । पछिल्लो आठ वर्षका सर्पदंशका कारण १ सय ३१ ले ज्यान गुमाइकेका छन् । नेपालमा सर्पदंशको मृत्युदर १० प्रतिशत छ ।
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:०१